Hifantohan'ny Indoor LED Screen
Ahoana no mifidy Avo Power jiro LED?
LED ho tonga bebe kokoa faritra malaza amin'ny hazavana, satria angovo famonjena, dia mety haharitra ora maro kokoa eo ambany mitovy hery manimba, noho izany tena tsara koa ny tselatra mazava. Ary ny fomba hanaovana safidy tsara jiro no tena miahy ny olona izay te-hividy ny jiro LED. 1. LED be: sh LED isa ...
Fepetra nandritra LED fitehirizana sy ny fampiasana
LED dia tena saro-pady elektronika votoatiny, dia tsy maintsy ho malina tsara mandritra ny fitehirizana sy ny fampiasana, Raha tsy izany dia hahatonga ny mando LED, puncture na fahafatesana. Ary be dia be ny olana LED ihany no azo amin'ny fotoam-fampiasana. Fitehirizana: 1. hamandoana porofo sy ny anti-electrostatic fonosana amin'ny hamandoana absorbent vadiny ...
Inona avy ireo Refresh tahan'ny sy ny tahan'ny endriny?
Ny Refresh tahan'ny dia ny isan'ny fotoana iray maneho ny sary dia repainted na namelombelona isan-tsegondra. Araka ny matetika manondro ny dingana, ny Refresh ny tahan'ny dia aseho amin'ny Hertz. Izany hoe, ny Refresh taham-75 Hz dia midika hoe ny sary dia namelombelona in-75 tao anatin'ny iray faharoa. Ny tena mahazatra tahan'ny vaovao fa ...
Inona ny fomba Notarafina ny LED Screen?
Ny scanning LED Asehoy ny fomba Very hevitra ny olona maro, inona ny no miasa? Ary inona no ho vokatr'izany eo ho LED lamba? Ireto anareo antsipirihany vaovao: fiara IC tsirairay dia manana 16 tsimany ary dia afaka manery 16 LED Chip amin'ny indrindra. Voasakantsakan'ny fiara dia midika hoe fomba rehetra ny LED amin'ny LED Module dia entin'ny IC na oviana na T ...
Optimum fijerena lavitra
Optimum (tsara indrindra) fijerena lavitra ny lamba no nitarika ny fijerena lavitra ny mpanatrika nanome ny tsara indrindra traikefa maso ny mijery ny fampisehoana nitarika lamba sy tsy misy loko ario. Raha ny marina, dia tena sarotra ny hamaritra izany, satria misy vokany be loatra ny anton-javatra, toy ny Pixel dity ny fiara, ny SC ...
Inona no mijery zoro?
Viewing zoro no ambony indrindra amin'ny zoro iray maneho izay azo jerena amin'ny maso ekena fampisehoana. Izany dia ahitana ny fijerena horizontal zoro sy ny fijerena mitsangana zoro. Ny sary toa garbled, zara raha tototry ny, ny mahantra kosa, Mason'ny na reraka loatra ivelan'ny nilaza nijery fiolahana isan-karazany, ny ...
Ny fanazavana ny ingress fiarovana (egIP65)
Ingress Protection (IP) dia Eoropeana ampy izay mamaritra ny ambaratonga ny fiarovana omen'ny ny fefy ny herinaratra fitaovana. Ny rafitra dia ahitana naoty ny taratasy IP arahina isa roa: Ny isa voalohany manondro ny ambaratonga ny fiarovana mafy ingress zavatra avy any ivelany. T ...
Inona no maha samy hafa ny SMD ka atsobohy?
SMD ihany koa ny atao hoe SMT (surface niakatra teknolojia), ny SMD jiro dia soldering eo amin'ny solaitrabe ambonin'ny PCB. SMD nitondra Asehoy no be an-trano ampiasaina ho an'ny tetikasa. Amin'izao fotoana izao ihany koa no ampiasaina ho an'ny tetikasa ivelan'ny trano. Ny ivelan'ny trano SMD nitarika mampiseho dia ampy matotra, ny rano IP65 porofo amin'ny taona fizahan-toetra. Hanoboka (lafiny roa ...
Fahasamihafana eo LED Display Light Sources
Ny loharanom-baovao no fahazavana LED zavatra manan-danja ho an'ny LED fampisehoana fampisehoana, izay mamaritra ny loko tsy miovaova, ny famirapiratry ny mazava, fijerena zoro sy ny vola lany amin'ny lamba. Eto hampahafantatra ny maha samy hafa ny teboka teraka, hanoboka sy SMD fahazavana LED loharano. 1. Dot teraka Module: Izany dia ny antitra endrika, nivoatra avy amin'ny int ...
No famantarana sarotra ny fandaharam-potoana?
Tsia mihitsy. Ny fandaharana ho an'ny ankamaroan'ny Displays atao mampiasa tanana-natao mitokana, tsy misy solosaina na rindrambaiko manokana no ilaina. Ny fanaraha-maso dia mahomby lavitra ny fandaharam-potoana na hanova ny famantarana avy ka ny 25 tongony izy. Ny fampisehoana dia afaka mampiasa na lavitra na ny mora ampiasaina rindrambaiko.
Ahoana no mifehy manontolo LED loko Display Quality?
LED singa manan-danja indrindra dia ny faritra miloko LED fampisehoana. Noho izany, fanatsarana ny kalitaon'ny kasinga LED no fanalahidy mba hanao tsara loko LED fampisehoana feno. Misy zava-dehibe dimy tondro mba hanombanana ny singa toetra: 1) Ny tsy tahan'ny Toy ny loko feno LED miseho nangonin ...
Inona no fanaon'ny LED fampisehoana?
AeroV dia afaka manolotra famolavolana sy mpanamboatra namboarina mba hifanaraka fampiharana hafa-namboarina LED Displays, izay azo natao araka ny mila mihevitra ny mpampiasa sy ny lafiny hafa, mba hahafahany mora foana ho foana. Mazava ho azy fa ny fikojakojana manampy hanatsara ny fiainan'ny elektronika equi ...
Miantso 1 Floor, Block A2, Langxin Industrial Zone, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, Sina.
Kanjo Nahita Asehoy Screen Video Wall takelaka , Seamless Led Video Wall, Led Outdoor Advertising Board, Led Display Billboard, Indoor Led Video Wall, Waterproof Led Screen,